Ogaden News Agency (ONA) – Jaaliyada Ogaadeenia ee Germany oo Shirkii sanadlaha ahaa ku qabatey Magaalada Offenbach/Frankfurt.
Jaaliyada Ogaadeenia ee Germany oo Shirkii sanadlaha ahaa ku qabatey Magaalada Offenbach/Frankfurt.
Jaaliyada Ogaadeeniya ee dalka Germany ayaa Shirkoodee sanadlaha ahaa ku qabatey Magaalada Offenbach/Frankafurt, Shirkaas oy Hogaaminayeen Maamulka Jaaliyada iyo Ururka Dhalinyarada Ogaadeeniya fariciisa Germany OYSU-Germany ayaa looga gol-lahaa dajinta Qorshaha Shaqada ee Jaaliyada ee sanadkan 2012 iyo Xuskii/Baroor-diiqda ahaa ee Xasuuqa Shacabka Ogaadenia.
Saacadu markey aheyd 2-dii Duhurnimo ayaa Shirka lagu furey aayado Quraan ah iyo Wacdi Diini ah, kadiban waxaa loo istaagey Heesta Calanka Ogaadeeniya iyo in loo duceeyo shuhadaha Ogaadeeniya ee ku geeriyoodey gacanta gumeysiga daalimka ah. Kadib gudoomiyaha jaaliyadda ayaa ka warbixiyey Xaalada uu hada ku sugan yahey dadka iyo dalka Ogaadeeniya iyo gumaadka shacabka lagu hayo, halkaasoo ay xubnihii shrka fadhiyaya uu mid walba ka xogwaramay.
Kadib waxaa laga hadley in laga xisaabtamo wixii uga qabsoomay jaaliyadda qorshayaashii Sanadkii tagey ee 2011ka oo ka koobnaa ilaa iyo 18-qodob oo ahaa hawlo balaadhan oo u qabsoomay iyo waxyaabo yaryraa oo duruufo awgood aan qabsoomin.
Waxaa iyagana warbixin qiima badan soo jeediyey maamulka OYSU-Germany, kuwaasoo ka warbixiyey wixii u qabsoomey mudadii sanadka aheyd ey OYSU-Germany ay jirtay, sida dhinaca, wax soo saarka, taakuleynta halganka, tirada sii kordheysa ee xubnaha OYSU iyo tayada wax-qabad ee maamulka mintidka ah ee OYSU-Germany.
Warbixanada ka dib ayaa la guda galay in la dhiso maamulka Jaaliyada Ogaadeeniya ee dalka Germany oo xilka heyn doona labada sanadood ee soo socota, kuwaas oo cod gacan-taag ah lagu ansixiyey.
Waxaa doorashada ka dib la gudo-galey Xuskii Maalinka xasuuqa Shacbiga Ogaadeeniya, halkaasoo Dhalinyarada OYSU ku soo bandhigeen Filim aad u qiimo-badan oo dadkii daawadey kaga ilmeysiiyey, kuna dhalisay is-caraabin, wisiisi iyo aynu guntiga adkeysano shabkeenana difaacno. Waxaa kaloo laga hadley Doorka ay haweenka Ogaadeeniya ku leeyihiin Halganka Gobanimadoonka Ogadenya iyo taakuleynta ay Shacabka ay la garab-joogaan habeen iyo dharaarba, halkaas oy gabdhuhu ku soo bandhigeen Filim muujinaya Sharafta iyo Qiimaha Gabdhaha Ogaadeeniya ay leeyihiin iyo sidey mintidka u yihiin,
Wuxuu shirku canbaareeyay Gacan-ku-dhiigle Meles Zinawi oo ku mamay daadinta dhiigga shacabka Somaaliyeed gaar ahaan Ogaadeeniya. Waxaan kaloo uu canbaaraynaynaa baadii shacabka ee Meles uu u soo raray dibadda.
Waxaa shirka canbaarayn iyo dhaleecayn dusha looga tuuraynaa kooxda budhcadka ah ee u tolowda KT Meles Zinawi, isla mar ahaantaana u soo safriyay baadii Zinawi uu Somalida ka qaadayay magaaladaLondon. Wuxuu shirka ugu baaqayaa dadweynaha in kooxdan ilma Tigree aan lagu kadsoomin oon lamoodin dad Soomaali ah.
Baaq iyo Guubaabin:
Jaaliyada Ogaadeeniya eeGermanywaxey ugu baaqaysaa dhamaan Jaaliyadaha Ogaadeeniya ee dibada iney ka dhiihdiyaan damaca gumeysiga uu ka leeyahay jaaliyadaha dibadda oy ku beeneeyaan gumeysiga Guuro-bahaleynta uu dibadaha ugu soo qadhaab-doonanayo. Sidoo kale wuxuu shirku ku Gubaabinayaa Shacabka Ogadeeniya ee Gumeysi diidka ah iney si mintidnima ah oo mideysan ku hor-istaagaan gumeysiga dalkooda ku soo duuley.
Wuxuu Shirku ku soo afjarmay guul iyo jawi wanaagsan, waxaana lagu balamey in la sii laban-laabo Shaqada jaaliyada iyo qorshaha sanadkan 2012-ka ee la dajiyey iyo in qadiyada Ogaadeeniya si ka sii fiican sidii sanadkii hore loo gaadhsiiyo bulshada caalamka iyo DawladaGermany, khaasatan Haydaha Xuquuqul-insaanka oo sifiican loo gaadhsiiyo xad-gudubyada Gumeysigu uu ku hayo Sahcbiga Ogaadeeniya.
Axmed Gaboose, Ogaden News Agence (ONA)